Ogaden News Agency (ONA) – Deg Deg: Kal-Fadhigii TPLF oo Mar Kale Fashilmay.
Deg Deg: Kal-Fadhigii TPLF oo Mar Kale Fashilmay.
Posted by Dulmane	/ November 16, 2017
Wararka naga soo gaadhaya magaalada Maqale ee xarunta Gobolka Tigrey ayaa sheegaya in mar kale lagu kala kacay shirkii urur kusheega TPLF maalmihii lasoo dhaafay uga socday magaalada Maqale.
Sida xogta aan kuhelayno waxaa mar kale is afgaranwaa iyo is haaraan kudhamaaday shirkii golaha dhexe iyo gudiga fulinta ee ururka talada wadanka Itoobiya kuhabsaday ee TPLF uga socday magaalada Maqale, kaas oo sida lasheegayo uga siidaray kalajabkii ururka dhexdiisa ahaa.
Shirkan oo ay soo xaadireen saraakiil sar sare iyo waliba dad miisaan kuleh siyaasada wadanka Gumaysiga Itoobiya ayaa loogu magac daray shirka qiimaynta iyo isla xisaabtanka ururka TPLF, waxaana bilowgii shirka hadheeyay khilaaf xoogan oo udhaxeeyay garabyada kala aragtida ah ee TPLF.
Warka ayaa intaas kudaraya in ay shirka iskaga baxday haweenayda mar aad loo xushmayn jiray ee udhaxday kaligii taliyihii bakhtiyay ee wadanka Itoobiya hogaamin jiray Azeb Masfin, taas oo sida lasheegayo kaxanaaqday qiimayntii iyada lagu samaynayay.
Azeb Masfin oo mar ahayd awooda kaliya ee wadanka maamusha ayaa lagu eedeeyaa wax isdaba marin iyo in ay hanti aad ubadan dalka dibadiisa kushubatay ayaa sida lasheegayo wax laga waydiiyay kutagri falkeeda awoodeed waxayna shirka ddibada uga baxday iyadoo aad uga cadhaysan su’aalaha kulul ee lawaydiiyay.
Sidoo kale waxaa kulanka dibada uga baxay saraakiil sar sare oo kamid ah halbowlaha urur kusheega TPLF, kuwaas oo dhamaantood kabiyo diiday qaabka loola xisaabtamayo iyo sharaftooda dhulka lagu jiidayo.
Dhinaca kale kooxda TPLF ayaa lasheegayaa in ay mar kale isku maandhaafeen habka loo wajahayo siyaasada wadanka iyo sida looxalinayo kacdoonada siibadanaya, waxaana lasheegayaa in uu qofba qof ku eedeeyay qalalaasaha wadanka kajira.
Wixii arimahan kasoo kordha kala soco ONA.